ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » the Dog တို့ Park ကို မှစ. တစ်စုံတစ်ယောက်ကချိန်းတွေ့ဖို့ကိုဘယ်လို
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: နိုဝင်ဘာ. 29 2020 |2မိဖတ်ပြီးသား
ဒီကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ, ခင်ဗျားကဒေသန္တရခွေးကိုပန်းခြံမှာသင့်ရဲ့ furry မိတ်ဆွေနှင့်အတူ frisbee ပေါက်နေကြတယ်နှင့်သင်အကွာအဝေး၌သင်တို့၏ဝိညာဉ်သည်အလားအလာရှိသောအိမ်ထောင်ဖက်သတိထားမိမှာ. သင်အခုဘာလုပ်ပါသလဲ? ပထမဦးဆုံးမိတ်ဆက်နေတဲ့နေ့စွဲအတွက်သဘောတူညီချက်ပိတ်ထားသောမှ, ကျနော်တို့ကိုခွေးပန်းခြံမှတစ်စုံတစ်ဦးချိန်းတွေ့ကြပုံကိုအပေါ်အချို့သောအကြံပေးချက်များရေးသားပြုစုခဲ့ကြ.
အဖျား #1: သင့်ခွေးဟာနှစ်သက်ဖွယ် Trick သှနျသငျ
ဒါကြောင့်ခွေးပန်းခြံမှာလူတိုင်းခွေးချစ်ကြောင်းပြောဖို့လုံခြုံနေစဉ်, တစ်ခုအံ့သြ-ကိုခံထိုက်သောသူလှည့်ကွက်သိတယ်တဲ့ခွေးသည်ဖြစ်ရာတစ်ခုခုလည်းမရှိ. တစ်ဦးပေါ်ပေါ်ထင်ထင်မဖြစ်အောင် command ကိုသုံးခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်သင်၏ခွေးကိုသင့်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဆောင်ပေမယ့်အလိုတော်ကျက်သရေကိုအခြားသူများမသာတဲ့လှည့်ကွက်သင်ကြားပေးနိုင်.
အဖျား #2: သင်၏ခွေးတို့သည်အခြားခွေးများနှင့်အတူ Play ကြစို့
သင့်ရဲ့ခွေးကိုအခြားခွေး likes သို့ရာတွင်ထိုသူတို့နှင့်အတူကစားအတော်ပင်မသာကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်သင်သည်ထိုမျှလောက်ပိုချဉ်းကပ်ရစေတယ်. Plus အားသင်ပယ် hit ဘူးဆိုရင်, သင့်ရဲ့ခွေးအလားအလာအတူတူအိမ်ခေါင်မိုးအောက်မှာအသက်ရှင်လိမ့်မည်အဘယ်သူမျှမကတခြားသူတွေနဲ့အတူမရပါဘူးသူတစ်ဦးကိုခွေးဆောင်ခဲ့ခြင်းငှါအလို. အဆိုပါ key ကိုသင့်ရဲ့ခွေးပထမဦးဆုံးမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများဖြစ်ရရန်ဖြစ်သည်.
အဖျား #3: ပေါ့ပေါ့တန်တန်, Conversation နှင့်အတူဖွင့်ပါ
ဒါကြောင့်အဆင်းလှသောတနေ့ထွက်ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့ခွေးနှစ်ယောက်လုံးတယောက်ကိုတယောက်နှင့်အတူကစားနေကြတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်, ပေါ့ပေါ့တန်တန်စကားပြောဆိုတက်ဒဏ်ခတ်. ဒါဟာဒီစကားပြောနေစဉ်ဖြစ်ပါသည်, သင်သည်ဤပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအကြောင်းကိုပိုမိုလေ့လာသင်ယူရလိမ့်မယ်. နှေးနှေးပယ်ဖွင့်ပါနဲ့ဦးဆောင်အရပ်ကိုကြည့်ရှု.
အဖျား #4: တစ်ဦး Doggy နေ့စွဲတွေအတွက်ချိန်းဖုန်းနံပါတ်
သင်အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောဆစကားပြောပြီးပါပြီပြီးတာနဲ့, သူတို့များသောအားဖြင့်ခွေးပန်းခြံငှါလာကြသောအခါအကိုမေး. ထိုအခါသင်က doggy ရက်စွဲညှိဖို့နံပါတ်များဖလှယ်အကြံပြု. ဒီကနဦးနေ့စွဲကသင့်ခွေးပတ်လည်မှာအာရုံစူးစိုက်သည်အဖြစ်ခြိမ်းခြောက်ကဲ့သို့ဖြစ်ရကြမည်မဟုတ်.
အဖျား #5: တစ်နေ့စွဲဖိတ်ကြားခြင်း Extend – အဘယ်သူမျှမခွေးများ
သင်သည်သူတို့စိတ်ဝင်စားကြကြောင်းသိပြီးတာနဲ့, ညစာစားပွဲရက်စွဲပေါ်တွင်ထိုသူတို့ကိုနှုတ်ကိုမေး. တစ်ဦးထက်ပိုသောရင်းနှီးသော setting ကို sans ခွေးအတွက်တွေ့ဆုံပင်နက်ရှိုင်းတဲ့စကားပြောဆိုရန်ဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မည်မျှော်လင့်ပိုပြီးတစ်ခုခုသို့ဦးတည်စေလိမ့်မည်.
အဲဒီအကြံပြုချက်နှင့်အတူ, သင်ယခုခွေးပန်းခြံမှာကိုသင် cutie မြင်ရမယ့်အချိန်လုပ်ဖို့ဆိုတာသိ.